Umkhiqizi kanye nomhlinzeki we-veneer veneer stacker | Ukuxubana
Isivinini esiphezulu se-veneer stacker, singanciphisa kakhulu izindleko zabasebenzi futhi sithuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza, sinamamodeli amaningi ongawakhetha, afana nohlobo lwe-roller, uhlobo lwepuleti lokucindezela, kanye nohlobo lwe-adsorption oluthuthuke kakhulu. Usayizi omkhulu we-stakcer ngu-4ft no-8ft. Futhi singenza obunye usayizi njengemfuneko yamakhasimende.
Isitaki sinohlelo oluphezulu oluhlakaniphile olulawulwa yi-PLC. Iyakwazi ukufanisa ijubane lomshini wokuxebula ngokuzenzakalela ngokuxhaswa kwezinzwa eziningi ezilungiswe endaweni ehlukile ukuhlola i-veneer njalo. Imikhiqizo engafaneleki ingahle ihlelwe ngokuzenzakalela ngokuya ngezidingo.Kunemisebenzi efana nokubala okuzenzakalelayo nokwethusa, ukudlulisa okuzenzakalelayo.
Lapha sincoma uhlobo lwe-vacor adsorption, kepha futhi sinezinhlobo ezahlukahlukene njengokujika kwe-roller nokukhulula uhlobo nohlobo lokushaya. Amakhasimende angakhetha okulungele bona ngokwabo.
Umshini wokugcwala we-veneer uyinhlanganisela enhle yomshini wokuxebuka. Kuyasiza kakhulu ukuthuthukisa ukusebenza kahle.
Inkonzo yethu - awukho umkhawulo wesikhathi wenkonzo yakho, amahora angama-24 yilokho okumele sikuqinisekise.Indinganiso yesevisi yethu - Ikhasimende liyaneliseka njalo!
Uma ucabanga ukuthenga noma imuphi umshini wokhuni, ungangabazi ukuxhumana nathi.
1.Imodi ye-vacor adsorption inamandla amakhulu ukukhangisa ama-veneers wokujiya ahlukile noma ngabe ubukhulu obukhulu noma ubukhulu obuphansi.
2.I-veneer yekhwalithi ephansi enjengezimbobo ezinkulu noma hhayi ucezu olugcwele izolungiswa ngokuzenzekelayo.
3.Uhlelo lokudlulisa inqwaba oluzenzakalelayo lusiza ukonga izindleko zabasebenzi.
4.Ijubane lingalungiswa ngokuya ngejubane lokuxebuka.
5.Ukubalwa kwe-veneer okuzenzakalelayo, asikho isidingo sokubala ngomsebenzi.
6.Ukungayeki ukusebenza. Uma kwenziwa inqwaba eyodwa, ngenkathi kudluliswa inqwaba isitaki sisengakwazi ukufaka veneers amasha eza.
Langaphambilini Yokwakha yaseGrisi uyaxebuka Futhi Cutting Machine